Madaxweynaha Jubbaland oo Socdaal ku tegaya Dhoobley - Awdinle Online
Madaxweynaha Jubbaland oo Socdaal ku tegaya Dhoobley
February 18, 2020 (Awdinle Online) – Dhoobleey Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo wafdi la socda ayaa ku sii jeeda degmada Dhoobleey ee ku taala xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ee gobolka Jubbada hoose.
Safarkan ayaa waxaa madaxweynaha ku wehlinayo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada, kuwaas oo safar dhulka ah ku gaari doono magaaladaasi Dhoobleey.
Ujeedada socdaalka, Axmed Madoobe ayaa la xariirta kulamo uu la qaadan doono saraakiisha Jubbaland ee ka howlgala Dhoobley, isaga oo kala hadli doono dhaq dhaqaaqyada ciidan ee haatan ka socda gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya.
Sidoo kale madaxweynuhu waxaa kulamo gaar gaar ah la qaadan doonaa saraakiisha ciidanka uu kala arrinsan doono howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee gobolada Jubbooyinka.
Ammaanka ayaa si aad ah loo adkeey, iyadoo ciidamo dheeraad ah lagu arkayo qeybo ka mid ah Dhoobleey, kuwaas oo sugaya amniga madaxweynaha iyo wafdigiisa.
Maamulka Jubbaland ayaa maalmihii la soo dhaafay waday abaabul ka dhan ah dowladda federaalka oo dhowaan ciidamo badan geysay gobolka Gedo ee maamulkaasi.
Arrintaan ayaa saare u sii qaaday khilaafka siyaasadeed ee labadan dhinac, kaas oo soo bilowday, kadib dib u doorashadii Axmed Madoobe loogu doortay hoggaanka Jubbaland.
Previous articleSarkaal kasoo baxsadey Ururka Al-Shabaab oo lagu soo bandhigey Bakool Xudur
Next articleMadaxweyne Deni oo Magacaabay Guddiga Qaban-qaabada shirka aayo ka tashiga Puntland